I-14 yamaphephadonga ahambelana ngokugqibeleleyo nejet emnyama iphone 7
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-14 yamaphephadonga afanelekileyo e-Jet Black iPhone 7
I-14 yamaphephadonga afanelekileyo e-Jet Black iPhone 7
I-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus zikhutshwe ngokusemthethweni. Ukulinda kuphelile, ekugqibeleni! Njengesiqhelo, iimodeli ezintsha ziyamangalisa ukujonga- ubuhle obuyilwe ukusuka phezulu kuye ezantsi, ngaphambili ukuya ngasemva, nakuzo zonke iindawo ezijikelezileyo, kugxilwe kugxilwe kwiinkcukacha- kwaye oku kulindeleke kakhulu kuApple. Ngeli xesha ngoku, nangona kunjalo, kukho inkwenkwezi entsha kwi-iPhone horizon, ekhanya ngokuqaqambileyo kwaye ukuthengisa njengama-hotcakes , waxelwa.
Ngena, i-iPhone 7 Jet emnyama-emnyama kunesixhobo esimnyama esine-aluminium ephezulu yokuqaqamba okwenziwe ngu-Apple ubeke inyani yokhathalelo kuyilo kunye nokudibanisa. Ukuze ufezekise eli nqanaba lokuhomba kunye nokungabinamthungo phakathi kwezinto, indawo ebiyelweyo yefowuni kunye neapos zihamba kwiinkqubo ezininzi ezintsonkothileyo eziqinisekisa ukuba ii-apos ziya kugqibela zibonakala zigqibelele. I-Apple ibeke umsebenzi omninzi ekwakheni eyona nto iphambiliumvayesixhobo. Kodwa kuthekani ngaphambili? Ewe, yenziwe & yohlobo olunye lweglasi, kwaye ewe, ijongeka intle, kodwa uthini malunga neyona nto inkulu ngaphambili - isikrini? Uyenza njani ibonakalise inqanaba lokhathalelo olubekiweyo ekwenzeni yonke ifowuni? Uluhambisa njani uvakalelo olungenamthungo, ulungelelwaniso phakathi kwezinto, imilo, kunye nombala, ukusuka kubungakanani bomzimba uye kwilizwe elibonakalayo? Impendulo ilula. Ukhetha ukusebenzisa amaphephadonga ayenzelwe iifowuni yakho ngokukodwa, amaphephadonga athathela ingqalelo zonke iimpawu kunye nobunzima bokuyilwa kwayo. Ke, xa uyithethile loo nto, kwaye usazi ukuba kunzima kangakanani ukufumana iphepha lodonga elifanelekileyo - ungasathethi ke ngaloiphepha lodonga-Sisondeza kuwe ingqokelela yethu ecekeceke yokutshixa- kunye nemifanekiso yamaphephadonga eskrinini sakho esitsha se-iPhone 7 Jet emnyama. Njengokuba kunjalo, sicinga ukuba la maphephadonga aya kuhambelana nokwahluka matte okumnyama ngokunjalo! Yonwabele!
Cofa ukuze wandise
Yonke into iqala ngopolishi ojikelezayo osusa ukungafezeki kwizindlu kwaye ukhokelela kumphezulu ocacileyo, ofana nesipili. Ukuvalelwa emva koko kudlula kwinkqubo ye-anodization, eyenza umaleko okhuselekileyo we-oxide. Le nkqubo ibandakanya ukungenisa izindlu kwisisombululo se-electrolytic esonyusa umbandela kunye ne-apos; ukumelana nokubola kunye nokuvumela ukudaya.
Idayi enye yento emva koko ifunxwa ngefuthe le-capillary, ngelixa iba yinxalenye yomphezulu ngokwawo. Okokugqibela, ibhafu yamasuntswana e-magnetized esetyenziselwa ukucoca umaleko we-anodized.
Njengoko sele uqikelele, ezi wallpapers azange zikhethwe ngokungacwangciswanga- ezo ayizizo indlela esizenza ngayo izinto apha - kodwa endaweni yoko zathathwa kwiividiyo zentengiso zeApple kunye neapos yeJet Black iPhone 7, ebonisa iinkqubo esele zikhankanyiwe. Asizukuzibekela umda kuloo nto, nangona kunjalo, njengoko sikhuphele uninzi lwamaphephadonga afanelekileyo kwiimodeli ezintsha ze-iPhone emnyama. Ngaba uyibonile entsha Intengiso ye-iPhone 7 ? Ukuba unayo, mhlawumbi uyayikhumbula inyamakazi engaqondakaliyo - omnye wemifanekiso emininzi enamandla kwintengiso, eboniswe kwiscreen ngeqhezu lomzuzwana. Sicinga ukuba ikhangeleka intle, ke sigqibe kwelokuba siyigcine kweli phepha lodonga:
Kwaye thina & apos; asikenzi okwangoku! Nantsi iapos yamaphephadonga, elungele zombini i-iPhone 7 Jet emnyama kunye ne-iPhone emnyama, iphonononga imixholo yendawo kunye nokuphelelwa lixesha, yokuhamba kunye nokuzola, kunye noyilo olukhulu kunye nobuhle obuncinci. Yonwabele!
yeyiphi ingxelo ye-sql esetyenziselwa ukwenza itafile kwiziko ledatha?
Ukuhlaziywa kwespne neo hybrid ex
IVirgin Mobile kunye neapos; s isicwangciso esitsha seedola ezingama-20 ezikhoyo namhlanje kwiWalmart; abathengi kufuneka bakhethe nokuba yeyiphi intetho okanye itekisi
Ungazimisa njani ezo zilumkiso zingxamisekileyo kwiVerizon okanye kwi-Sprint Samsung Galaxy S III
U-Sony utyhila i-earbuds ezingenazingcingo eziyinyani nge-Bass eyongezelelweyo kunye neefowuni ezintsha zokurhoxisa ingxolo
I-Google Pixel vs Samsung Galaxy S7